20 N’oge ahụ, Hezekaya rịara ọrịa ruo n’ọnụ ọnwụ.+ Aịzaya+ nwa Emọz onye amụma wee bịakwute ya, sị ya: “Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Nye ezinụlọ gị iwu,+ n’ihi na gị onwe gị ga-anwụ, ị gaghị adị ndụ.’”+
2 O wee chee ihu ya n’ahụ́ ụlọ+ wee malite ikpeku Jehova ekpere,+ sị:
3 “Ana m arịọ gị arịrịọ, Jehova, biko, cheta+ otú m si jiri eziokwu+ na obi zuru ezu+ jee ije+ n’ihu gị, ọ bụkwa ihe dị mma n’anya gị ka m mere.”+ Hezekaya wee malite ịkwasi ákwá ike.+
4 O wee ruo na mgbe Aịzaya na-erubeghị na mbara èzí nke etiti, okwu Jehova ruru ya ntị,+ sị:
5 “Laghachi, gwa Hezekaya bụ́ onye ndú+ nke ndị m, sị, ‘Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke+ Devid bụ́ nna nna gị kwuru: “Anụwo m+ ekpere gị.+ Ahụwo m anya mmiri gị.+ Lee, m ga-agwọ gị.+ N’ụbọchị nke atọ, ị ga-agbago n’ụlọ Jehova.+
6 M ga-atụkwasịkwa afọ iri na ise n’ụbọchị ndụ gị, m ga-anapụta gị na obodo a n’ọbụ aka eze Asiria, m ga-echebekwa+ obodo a n’ihi mụ onwe m nakwa n’ihi Devid ohu m.”’”+
7 Aịzaya wee sị: “Werenụ mkpụrụ fig a mịrị amị nke dị mbadamba.”+ Ha wee were ya tụkwasị n’etuto toro ya,+ o wee jiri nke nta nke nta gbakee.+
8 N’oge ahụ, Hezekaya sịrị Aịzaya: “Gịnị bụ ihe ịrịba ama+ ga-egosi na Jehova ga-agwọ m, na m ga-agbagokwa n’ụlọ Jehova n’ụbọchị nke atọ?”
9 Aịzaya wee zaa, sị: “Nke a ga-abụrụ gị ihe ịrịba ama+ si n’aka Jehova na Jehova ga-eme ihe ahụ o kwuru: Onyinyo ọ̀ ga-aga ihu nzọụkwụ iri n’elu ebe e si arịgo n’ụlọ, ka ọ̀ ga-aga azụ nzọụkwụ iri?”
10 Hezekaya wee sị: “Ọ dị mfe na onyinyo ga-aga ihu nzọụkwụ iri, ma ọ dịghị mfe na onyinyo ga-aga azụ nzọụkwụ iri.”+
11 Aịzaya onye amụma wee malite ịkpọku Jehova; o wee mee ka onyinyo nke gbadaworo agbada laa azụ n’elu ihe nrịgo ahụ, ya bụ, n’elu ebe e si arịgo n’ụlọ Ehaz, ọ lara azụ nzọụkwụ iri.+
12 N’oge ahụ, Birodak-baladan+ nwa Baladan bụ́ eze Babịlọn+ zigaara Hezekaya akwụkwọ ozi+ na onyinye; n’ihi na ọ nụrụ na Hezekaya rịara ọrịa.
13 Hezekaya wee gee ha ntị ma gosi ha ụlọ ndebe akụ̀+ ya dum, ọlaọcha na ọlaedo+ na mmanụ bọlsọm+ na ezigbo mmanụ na ngwá agha ya na ihe niile dị n’ebe a na-edebe akụ̀ ya. Ọ dịghị ihe Hezekaya na-egosighị ha n’ụlọ ya nakwa n’ebe niile ọ na-achị.+
14 E mesịa, Aịzaya onye amụma bịakwutere Eze Hezekaya wee sị ya:+ “Gịnị ka ndị ikom a kwuru, ebeekwa ka ha si bịakwute gị?”+ Hezekaya wee sị: “Ha si n’ala dị anya bịa, ha si Babịlọn.”
15 O wee gaa n’ihu ịsị: “Gịnị ka ha hụrụ n’ụlọ gị?” Hezekaya wee zaa, sị: “Ha hụrụ ihe niile dị n’ụlọ m. Ọ dịghị ihe ọ bụla dị n’ebe m na-edebe akụ̀ nke m na-egosighị ha.”+
16 Aịzaya wee sị Hezekaya: “Nụrụ okwu Jehova,+
17 ‘“Lee! Ụbọchị na-abịa, mgbe a ga-eburu ihe niile dị n’ụlọ gị,+ ihe nna nna gị hà kwakọbakwara ruo taa, laa Babịlọn.+ Ọ dịghị ihe ga-afọdụ,”+ ka Jehova kwuru.
18 “A ga-akpọrọkwa+ ụfọdụ n’ime ụmụ gị ndị ikom ga-esi n’ahụ́ gị, bụ́ ndị ị gaje ịmụ, ha ga-aghọkwa ndị na-eje ozi+ n’obí eze Babịlọn.”’”+
19 Hezekaya wee sị Aịzaya: “Okwu Jehova nke i kwuru dị mma.”+ O wee gaa n’ihu ịsị: “Ọ́ bụghị otú ahụ, ma ọ bụrụ na udo na eziokwu+ ga-adịgide n’ụbọchị m?”+
20 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Hezekaya na ike niile ọ kpara na otú o si rụọ ọdọ mmiri+ ma waa okpo mmiri+ wee mee ka mmiri bata n’obodo, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Juda?
21 N’ikpeazụ, Hezekaya sooro nna nna ya hà dinaa;+ Manase+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D12%26Chapter%3D20%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl